Control 35 (वा )०) माथिका महिलाहरूको लागि जन्म नियन्त्रण चेकअप - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी, समाचार कल्याण समुदाय, कम्पनी भारी खेल समुदाय समुदाय, कल्याण खेलहरु कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा मनोरञ्जन घरपालुवा जनावर औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, चेकआउट कम्पनी, औषधि जानकारी औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> After 35 पछि सबै भन्दा राम्रो जन्म नियन्त्रण के हो?
After 35 पछि सबै भन्दा राम्रो जन्म नियन्त्रण के हो?
यदि तपाईंले भर्खर माईलस्टोन जन्मदिन मनाउनु भएको छ भने, तपाईंले प्रयोग गरिरहनु भएको जन्म नियन्त्रणलाई के तपाईंले कुनै ध्यान दिनु भएको छ?
सामान्यतया, over० बर्ष भन्दा माथिका महिलाहरुको लागी जन्म नियन्त्रण 35 over बर्ष भन्दा बढी महिलाहरुको लागी जन्म नियन्त्रण भन्दा धेरै फरक छैन। यदि तपाई अहिले प्रयोग गरिरहनुभएको गर्भनिरोधक विधिबाट खुसी हुनुहुन्छ भने, र तपाईको स्वास्थ्य राम्रो छ भने, त्यहाँ वास्तवमै वास्तवमै छ। स्विच गर्न कुनै कारण छैन किनकि तपाईंको जन्मदिनको केकमा त्यहाँ अर्को मैनबत्ती छ।
उमेर एक्लो बारेमा केहि छैन जुन तपाईले एउटा विशेष प्रकारको जन्म नियन्त्रण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न भनेर वर्णन गर्दछ केट व्हाइट , एमडी, MPH, बोस्टन मेडिकल सेन्टरमा परिवार योजना मा फेलोशिप निर्देशक। यदि तपाईं कुनै पनि उमेरमा स्वस्थ हुनुहुन्छ भने, तपाईं केहि पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको केहि छनौटहरू समावेश गर्दछ:
जन्म नियन्त्रण गोलिहरू : तपाईं संयोजन गोली लिन सक्नुहुन्छ, जसमा दुबै एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टिन, वा प्रोजेस्टिन-मात्र गोली हुन्छ। दुबै कम-खुराक संस्करणहरूमा आउँछन्, र संयोजन गोलीहरू विस्तारित चक्र संस्करणहरूमा पनि आउँदछ।
IUDs : इन्ट्राउटरिन उपकरणहरू लोकप्रिय अभिनय हुन् जुन लामो अभिनय गर्ने रिभर्सिभ गर्भनिरोधक, वा LARC को हो। केहि, जस्तै मिरेना वा Liletta IUD हार्मोनल फारमहरू हुन्, जबकि अरूहरू जस्तै प्यारागार्ड IUD, तामा हुन्।
इंजेक्शनहरू : यदि तपाईं जन्म नियन्त्रण शट छनौट गर्नुभयो भने डिपो जाँच , तपाइँ गर्भावस्था रोक्नको लागि प्रत्येक तीन महिनामा प्रोजेस्टिनको एक इन्जेक्शन प्राप्त गर्नुहुन्छ।
प्रत्यारोपण : अर्को लामो-अभिनय उल्टो गर्भनिरोधक, प्रत्यारोपण तपाईंको शरीर मा प्रोजेस्टिन जारी गर्दछ तपाईंको शरीरको माथिल्लो पाखुरामा यसको स्थानबाट तीन बर्षको लागि।
प्याच : तपाईंको छालालाई तीन हप्तासम्म टाँसिनुहोस्, त्यसपछि हटाउनुहोस्। प्रत्येक महिना नयाँ लागू गर्नुहोस्।
योनी रिंग : यी लचिलो, हटाउन योग्य घण्टीहरू हुन् जसले दुबै एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टिन समावेश गर्दछ।
तर एउटा कुरा तपाईले गर्न नसक्नु भनेको सम्पूर्ण मुद्दालाई बेवास्ता गर्नु हो। कन्सप्टेसन छोड्नुहोस् जब सम्म तपाइँ पूर्ण रूपमा रजोनिवृत्ति नभएको थाहा पाउनुहुन्छ, भन्छन् मेरी जेन मिन्किन, MD , येल युनिभर्सिटी स्कूल अफ मेडिसिनमा प्रसूति, स्त्री रोग र प्रजनन विज्ञानको क्लिनिकल प्रोफेसर।
यसको मतलब तपाईंले राम्रो वर्षको लागि जन्म नियन्त्रणलाई बिदाई गर्नु अघि तपाईंले कुनै मासिक अवधि बिना नै पूरै बर्ष जानु आवश्यक छ।
तपाईंको आफ्नै जोखिम प्रोफाइल हेर्नुहोस्
जब तपाईले आफ्ना विकल्पहरूलाई तौल गर्नुहुन्छ, त्यहाँ केहि स्वास्थ्य समस्याहरू छन् विचार गर्न, तपाईको late० को दशकमा र 40० को दशक भरि। गर्भनिरोधक विधि छनौट गर्दा तपाईंले के सोच्न आवश्यक छ? टेक्सासको सान एन्टोनियोका ओबी-जीवाईएन, एमडी, वेंडी एस्केउ भन्छिन्, 35 35 पछि अनियोजित योजना बनाई गर्भधारणसँग सम्बन्धित बढ्दो जोखिमहरूको बिरूद्ध गर्भनिरोधका स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिमहरू तौल गर्न आवश्यक छ। यी जोखिमहरू 35 35 बर्ष मुनिका महिलाहरूको लागि पनि अवस्थित छन्, तर धेरै कम छन्।
यदि तपाईं or 35 बर्ष भन्दा माथिको हुनुहुन्छ र तपाईं धुम्रपान गर्नुहुन्छ भने, यो तपाईंको जन्म नियन्त्रण पिललाई बिदाइ गर्ने समय हो। धूम्रपानले जे भए पनि तपाईको हृदय रोगको जोखिम बढाउँछ। तर हार्मोनल जन्म नियन्त्रण र धुम्रपानको संयोजन रगत क्लोट हुने र उच्च रक्तचापको खतरा बढाउन सक्छ।
यदि तपाईं रक्त अवस्थाहरू जस्ता केही सर्तहरूको लागि जोखिममा बढ्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंको डाक्टरले तपाईंलाई केही गर्भनिरोधक विकल्पहरूबाट टाढा लैजान सक्छ। उदाहरण को लागी, संयोजन जन्म नियन्त्रण गोलिहरु मा दुबै एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टिन हुन्छ र रगत क्लोटहरु विकास को लागी तपाईको जोखिम बढाउन सक्छ। डेपो-प्रोभेरा भनेर चिनिने जन्म नियन्त्रण ईन्जेक्शन समयको साथ हड्डीको क्षयमा वृद्धिसँग जोडिएको लागि राम्रोसँग परिचित छ। यसले एस्ट्रोजेन समावेश गर्दैन, तर केहि महिलाहरु यो लिई सके पछि थ्रोम्बोसिस हुन सक्छ ।
केहि स्वास्थ्य अवस्था
तपाईं उच्च रक्तचाप छ भने, वा यदि तपाईं कम से कम २० बर्ष को लागी मधुमेह छ भने एस्ट्रोजेन युक्त तरिकाहरू बाट बच्न पनि सक्नुहुन्छ। आभासँग माइग्रेन टाउको दुखाइ अर्को सम्भावित contraindication हुन सक्छ, डा। व्हाइट भन्छन्।
तथापि, क्यान्सर हुने खतरा गम्भीर छ। तपाईंको क्यान्सर हुने जोखिम उमेरसँगै बढ्छ। त्यहाँ हुन सक्छ स्तन क्यान्सरको बढेको जोखिमको सानो सम्भावना केही मौखिक गर्भनिरोधकहरूसँग सम्बन्धित, तर यसले क्यान्सरका अन्य प्रकारहरूको कम जोखिमले अफसेट गर्न सक्छ, जस्तै अंडाशय र गर्भाशय क्यान्सर। र डा। एस्क्यूले टिप्पणी गरेझैं, नचाहिने गर्भावस्थालाई रोक्नको फाइदा केही हदसम्म जोखिमलाई पन्छाउन सक्छ। स्तन क्यान्सरको लागि विशेष आनुवंशिक उत्परिवर्तनको पारिवारिक इतिहास भएका महिलाहरूले अझै अन्य विकल्पहरू हेर्ने विचार गर्न सक्दछन्।
उत्तम जन्म नियन्त्रण विधि छनौट गर्दै
तपाईको 30० र s० को दशकमा तपाईले आफैलाई सोध्नु पर्छ - र उत्तरको बारेमा इमान्दार हुनुपर्छ - यदि तपाई भविष्यमा कुनै बच्चा जन्माउने योजना गर्दै हुनुहुन्छ।
हो, म बच्चा जन्माउने योजना गर्दैछु । यदि उत्तर हो हो भने, तपाईं डेपो-प्रोभेरा बाहेक कुनै पनी विधिसँग मात्र जान सक्नुहुन्छ। डा। ह्वाइटका अनुसार, डेपो-प्रोभेरा बन्द गरे पछि तपाईंको उर्वरता फिर्ता हुन केही समय लिन सक्दछ, र यदि तपाईं late० वा 40० को उमेरमा हुनुहुन्छ भने तपाईंसँग प्रशस्त समय हुँदैन।
हुनसक्छ मसँग बच्चाहरु छन्। यदि तपाईं सोच्नुहुन्छ भने, आईयूडी र प्रत्यारोपण महान हुन सक्छ किनकि यसले तपाईंलाई जन्म नियन्त्रणको बारेमा सोच्न नसक्दा पनि विकल्प दिन सक्दछ, यदि तपाईं १००% निश्चित हुनुहुन्न, डा।
होईन, म बच्चा जन्माउने योजनामा ​​छैन । यदि तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईं बच्चाहरू जन्माइसक्नुभयो भने, [शल्यक्रिया] नसबंदीको बारेमा सोच्नुहोस्, डा। व्हाइट सुझाव दिन्छ। जहाँसम्म, यदि तपाईं र तपाईंको पार्टनर त्यो मार्ग जान चाहनुहुन्न भने, तपाईं गोली, एक LARC, वा अन्य विधि प्रयोग गर्न जारी राख्न सक्नुहुनेछ, जबसम्म तपाईंसँग स्वास्थ्य समस्याहरू हुने छैनन्।
40० बर्ष भन्दा माथिका महिलाहरूको लागि जन्म नियन्त्रणले तपाईंलाई लक्षणहरूको प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्दछ पेरिमेनोपोज जुन तपाईंले अनुभव गरिरहनु भएको छ। तपाईंको डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस् यदि तपाईं तातो चमक, रात पसीना, र योनी सुक्खा जस्ता लक्षणहरूको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ र कुन विधिहरू तपाईंको लागि उत्तम हुन सक्छ छलफल गर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग कुनै विरोधाभास छैन भने, ईस्ट्रोजेन युक्त एक विधि, कम्बिनेशन बर्थ कन्ट्रोल पिल वा रि ring्गले तपाईंलाई ती लक्षणहरूको व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ, डा। मिन्किन। र यदि तपाईं एक नयाँ पार्टनरमा सम्मिलित हुनुहुन्छ भने, कन्डम प्रयोग गर्न नबिर्सनुहोस् - तपाईं कुनै पनि उमेरमा यौन संक्रमित संक्रमण प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईका विकल्पहरू खुला राख्दै
तपाईंको स्वास्थ्य वा अन्य आवश्यकताहरूमा आधारित, केही जन्म नियन्त्रण विकल्पहरू तपाईंको लागि 40० र 50० को दशकमा अरू भन्दा राम्रो हुन सक्छ। साथै, नयाँ कार्यहरूमा हुन सक्छ। यो पुन: मूल्या to्कन गर्न सधैं राम्रो हुन्छ किनभने त्यहाँ दृश्यहरू जहिले पनि नयाँ घटनाहरू हुन्छन्, डा। मिन्किन भन्छन्।
घाँटी दुखाई को लागी राम्रो गार्गल के हो
उदाहरण को लागी, संयुक्त राज्य खाद्य र औषधि प्रशासन एक नयाँ योनी औंठी कल को मंजूरी यो गणना छ २०१ 2018 मा। विपरीत नुभाआरिंग , बजारमा अन्य योनी औंठी, यो एक पूरै बर्षको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईंले अझै यसलाई प्रत्येक महिना हटाउनुपर्नेछ, तर तपाईंले फार्मेसीबाट प्रत्येक महिना नयाँ प्राप्त गर्नुपर्दैन।
र यदि तपाईंको हालको विधिले तपाईंको र तपाईंको विशेष आवश्यकताको लागि काम गर्दैन भने अरू केही गर्न डराउँदैनन्। यो परीक्षण र जन्म नियन्त्रण संग त्रुटि हो, डा Askew भन्छन्।
चिसो हुँदा राम्रो खानेकुरा
कसरी एक राती घाँटी दुखाइ बाट छुटकारा पाउन
गैर मधुमेह को लागी सामान्य रक्त ग्लुकोज दायरा
यो गर्भावस्था को दौरान aleve लिन सुरक्षित छ?
म पसिनाले भिजेको किन?